Ku soo dhawaada degmada Katrineholm. Information om Katrineholms kommun på Somaliska - PDF
Ku soo dhawaada degmada Katrineholm. Information om Katrineholms kommun på Somaliska
Download "Ku soo dhawaada degmada Katrineholm. Information om Katrineholms kommun på Somaliska - 2012"
1 Ku soo dhawaada degmada Katrineholm Information om Katrineholms kommun på Somaliska
2 Ku soo dhawaada degmada Katrineholm Ku soo dhawaada degmada Katrineholm. Dadka degen qiyaastii waa qofood. Si aad uga hesho nafsad ahaantaada waxaad inta ka heli kartaa macluumaad yar oo ku saabsan degmada sideey u dhisan tahay iyo fursadaha ka jiraba. Politik: Siyaasadda: Degmada waa hay ad leh awood siyaasadeed. Golaha degaanka waa hay adda ugu sarreyso xagga awoodda. Muwaadinka waxaa ku saaran inaad go aansato codkaaga doorashada guud ee golaha degaanka cidda aad u aragto ineey hoggaamin karto degaanka, iyadoo la raacaayo qof waliba tirada ay heshay. Golaha degaanka waa kan gaaro go aanada degmada. Golaha degaanka waa kan go aanada ku gaaro si dimuqraadi ah xagga xisbiyada kala duwan ee siyaasadda. Afar sano kastaa qofka degen Katrineholm waxaa u codeyn kartaa xisbiga aad rabto. Tirada siyaasiyiinta gelaayo golaha degaanka ee xisbi kastaa waxay ku xiran tahay codadka xisbi kastaa helay. Golaha degaanka waxuu magacaabaa golaha fulinta iyo guddiyada. Katrineholm waxaa ka jiro 10 xubnood, Guddiga fulinta iyo golaha doorashada iyo kan awoodda maamulka. Awoodda sameyso mas uuliyiinta hawlaheeda waa ineey bixisaa ruqsadaha dhismaha iyo ineey bixiso kaalmooyinka dhaqaale iyo daryeelka dadka da da ah. Waxaad ka heli kartaa wixii kale oo dheeriya cinwaanaddaan: kommunen/ / Barn och utbilding: Carruurta iyo waxbarashada: Inaga degmada Katrineholm waxaan u aragnaa ineey muhiim tahay in dhammaaan ilmaha iyo dhallinyarada ay helaan waxbarasho fiican oo dhameystiran. Inta waxaad ka heli kartaa macluumaadka iyo talooyinka iskuulka. Waxay xaq u leeyihiin dhammaan ardayda cuntada iskuulka oo bilaasha(lacag la aan ah). Waxaa ilmuhu xaq u leeyihiin mar kasta cuntooyinka gaarka ay ugu baahan yihiin. Förskola: Marxaladda iskuulka ka horreyso ama Xanaanada ilmaha: Dhammaan ilmaha da doodu u dhexeyso 1 5 sano jir waxay xaq u leeyihiin ineey boos ka helaan xannaanada marka waalidku shaqeeynaayo ama waxbaranaayo. Waxayna ku xiran tahay taklufada xananada dakhliga qoyska.
3 Ilmaha waalidkood raadihaayo shaqo ama leh fasaxa waalidka ee walaal kale, waxaa lagu casumaa xannaanada 15 sacadood asbuuciiba. Katrineholm dhammaan ilmaha waxay xaq u leeyihiin oo madmuun ah ineey helaan boos xannaanada ah muddo afar bilood gudahood ah. Fritidshem: Waqtiyada firaaqa Iskuulka kadib: Degmada waxay diyaarisay waqtiyada firaaqa iskuulka kadib 13 jirka waalidkood shaqeeyo ama waxbarto, haddii ardaygu qabo baahiyo gaara sababo la xiriira qoyska xaaladdiisa guud darteed. Obligatorisk grundskola för skolår 1 9: Dugsiga asaasiga ee khasabkaa Sanad dugsiyeedka 1 9: Dugsiga asaasiga waxaa waaye sanadka waxbarasho ee 1 9 dhammaan ilmaha Sweden ku nool waa khasab waxbarashada, taas oo loola jeedo in ilmuhu aado dugsiga. Waxaa waajib noqonayo sanadka 7aad ee ilmaha, waxuuna ka baxaa marka ilmuhu dhameeyo sanad dugsiyeedka 9aad. Kuwa dalbaday magangelyada ilmahooda waajib kuma ahan, laakiin waxay xaq u leeyihiin ineey aadaan Dugsiga asaasiga. Ilmuhu waxuu awoodaa inuu bilaabo iyadoo aan khasab aheyn marxaladda dugsiga ka horreyso marka uu gaaro 6 Sano. Frivillig gymnasieskola: Rabitaanka Dugsiga sare: Marka ay ardaydu dhameeyaan dugsiyada asaasiga, waxay raadsan kaaraan Dugs sare oo 3 sano ah. Ardayda aan helin shahaaddada dhameystirka dugsiga asaasiga, waxay raadsan karaan barnaamij hordhac ah kana dalbanayaan Duveholmsgymnasiet. Dugsiga sare ee khaaskaa waxuu ku yaallaa Duveholmsgymnasiet. Katrineholm waxaa ka jiro 4 Dugsi sare oo kala ah:. Duveholmsgymnasiet. Ellwynska skolan. Katrineholms tekniska college. Linden gymnasiet. La xiriir xarunta maamulka haddii aad u baahan tahay warbixin dheeriya oo la xiriirto marxaladda xanaanada iyo iskuulkaba: Cinwaanka: Drottninggatan 19, Katrineholm Telefoon: Wixii kale oo dheeriya kala xiriir cinwaankaan: barn och utbildning
4 Utbildning och stöd för vuxna: Waxbarashada iyo kaalmada dadka waaweyn: Viadidakt waa hay ad ka jirto Katrineholm iyo Vingåker waxayna ka mas uul tahay hagidda hanuuninta dadka cusub ee soo galay, Luqada Swedishka ee soo galootiga, Dugsiyada asaasiga iyo sareba. Viadidakt waxaa kale ay ka shaqeysaa hagidda barbaarineed iyo xirfadeedba. Samhällsorientering for nyalända: Hanuuninta bulshada cusub: Waa baridda Sweden iyo sida bulshada Sweden u shaqeyso. Utbildning i svenska för invandare: Waxbarashada luqada ee soo galootiga: Waa waxbarashada luqada Swedishka ee dadka soo galootigaa ee ku hadla luqad aan aheyn luqada ay ku hadlaan waddamada Nordiska. Iyadoo la raacaayo duruufta qof kasta, laguna kaalmeeyhaayo qof kastaa sidii uu si dhaqsiya u baran lahaa luqada una helo shaqo iyo waxyaabaha kale oo uu u baahan yahay, una helaa xuquuqda iyo wajibaadka ka jira Sweden. Waxuu noqon karaa mid kala duwan waqtiga waxbarashada, kaas oo ku xiran saad wax u taqaan, iyo sida ay kuugu sahlan tahay barashada luqada. Grundläggande vuxenutbildning: Waxbarashada asaasiga ee dadka waaweyn: Waxbarashada asaasiga ee dadka waaweyn waa waxbarashada dadka da doodu ka weyn tahay 20 sano oo aan laheyn aqoonta ilmaha iyo dhallinyarada ee dugsiyada asaasiga ama waxbarashada lacag la aanta iyo tan dalabkaba. Go aanso hadafkaaga waxbarasho, ahaanshaha dhaqsaha ama gaabiska sida aad u rabto waxbarashada. Waxaad baran kartaa dugsiga asaasiga adigoo shaqeyhaayo ama baranaayo wax kale. Vidadidakt waxaa kale ay idiin soo bandhigeysaa waxbarashada dadka waaeyn ee leh ceebaha abuurista. La taliyeyaasha Viadidakt ayaa kaa caawin kara wajihiddaada waxbarsho. Gymnasial vuxenutbildning: Dugsiga sare waxbarashada dadka waaweyn: Dugsiga sare ee dadka waaweyn waa kan ay dhigtaan dadka waaweyn ee baahida u qabo xirfadaha dugsiga sare. La xiriir Viadidakt haddii aad rabto macluumaad dheeriya oo la xiriira waxbarashada dadka waaweyn: Vita huset
5 Cinwaanka: Drottninggatan 18, Katrineholm Telefoon: Wixii kale oo macluumaad dheeriya waxaad ka daalan kartaa cinwaankaan: Universitet, hogskola och yrkehogskola: Jaamacadaha,kulliyadaha iyo machadyada xirfadaha: Katrineholm waxaa ka jiro fursado waxbarasho sare. Viadidakt waxay xiriir la leedahay Jaamacado dhawr ah iyo kulliyado iyo machadyo farsamo. Waxaad heli kartaa inaad barato barnaamijyo kala duwan Katrineholm dhexdeeda. Guriga Kullbergska ee Katrineholm waxaa ka jiro adeegyo iyo faracyo iyo qalab farsamo oo ku an facaayo adigaaga ardaygaa. Qaybaha waxaa yaal Kumbiyootaro shaqo, waxaa kaloo la jiro fotokoobiyo iyo Internet iyo Printer (Daabace). La taliyeyaasha Viadidakt waxay ku faraxsan yihiin inaad heshay meel kugu habboon. La xiriir Viadidakt haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeriya oo la xiriira waxbarashada dadka waaweyn: Kullbergska huset(guriga Kullbergska) Cinwaanka: Bievägen 1B, Katrineholm Telefoon: Wixii kale oo macluumaad dheeriya ka eeg cinwaankaan: Hälsa, stöd och omsorg: Caafimaadka, kaalmada iyo daryeelka: Katrineholm dadka da daa waxay ka helayaan daryeel iyo ka fikiridda ay u baahan yihiin si ay ugu noolaadaan guryahooda muddo dheer sida ugu suurtagalsan. Kuwa aan awoodin in ay ku noolaadaan guryahooda waxay leeyihiin fursad ay ugu wareegi karaan dhismayaasha daryeeka ee degmada. La xiriir daryeelka dadka da daa haddii aad qabto su aalo la xiriira dadka da daa: Äldreomsorgen(Xarunta daryeelka dadka da daa)si toosa: Telefoon:
6 Personer med funktionsnedsättning: Dadka Curyaanadaa: Degmadu waxay caawisaa dadka curyaanada jirka iyo maskaxdaba ama curyaannimo maskaxdaa uu ku dhashay shaqo malmeedkooda iyo tamashleyntooda, guryo kooxeed ama caawimaad guri si ay u helaan nolol sida muwaadiniinta kale ee madaxa bannaan. La xiriir si toosa haddii aad qabto su aalo la xiriira daryeelka curyamiinta: Daryeelka curyaamiinta si toosa: Telefoon: La xiriir daryeelka, iyo maamulka xarunta daryeelka haddii aad rabto macluumaad dheeriya oo la xiriira kaalmada, caafimadka iyo daryeelka: Cinwaanka: Upplandsgatan 2, Katrineholm Telefoon: = Wixii kale ee macluumaad dheeriya kala xiriir cinwankaan: Socialförvaltningen ett social skyddsnät: Adeegga bulshada Shabakadda Ammaanka bulshada: Adeegga bulshada waxaa ka jiro caawimaad aad heleyso. Waxyaabaha aad ka heli karto waxaa ka mida Xallinta mushkiladaha dhaqaale, iyo ilmaha, dhallinyarada u baahan, kaalmada qoyska iyo idmaanka iyo deymaha, bandhigidda qormada miisaaniyadda, xiriirka iyo arrimaha qof ahaaneed ee dhammaan qaybaha ow ka koobmo sharciga siraha rasmigaa. Barn, ungdom och familjer: Ilmaha, dhallinyarada iyo qoyska: Adeegga bulshadu waxuu qaadaa mas uuliyadda gaarkaa ee shaqo si ilmaha iyo dhallinyarada ugu koraan duruuf aamina oo fiican iyadoo la racaayo sharciga Sweden. Ujeeddada guud waa in la bandhigaa dhammaan waxii la qaban karo oo kaalmo ah ee bulshooyinka gudaha isla shabakadda lafteeda. Cunuggu waa inuu helaa mudnaanta baahidiisa. Familjrätt: Xeerka qoyska: Maxkamadda qoyska waxay u soo bandhigee waalidka dhexdhexaadin, iyadoo ku adkeysaneyso in Aabbayaasha iyo hooyooyinkaa gaaraan heshiis ku saabsan arrimaha dhex yaal kuna saabsan xannaanada iyo degaanka iyo xiriiridda. Maxkamadda qoyska waxa kale ay ka shaqeysaa tabbaniga(korsashada)iyo xaaladaha Aabbenimo iyo qaaditaanka baaritaanka la xiriiro xannaanada, degaanka,iyo xiriiridda.
7 Familjenheten: Qoyska mideysan: Waxaa loola jeedaa mid ahaanshaha qoyska, qoyska leh ilmo/dhallinyaro u bahan kaalmo iyo dawo. Waxa ay helayaan waa kala duwan yihiin kuna xiran tahay baahiyaha qoys walba iyo awooddiisa. Tusaale ahaan ma lahan dawo ilmaha arko xoogid guriga dhexdiisa ama ilmaha la nool waalidkood oo isticmaalaayo mukhadaraad. Frida: Frida waa urur ka shaqeeyo caawinta dumarka iyo ilmaha dhibka kala kulmo dadka u dhaw(qaraabada). Frida waxaad wici kartaa adoo qarsoon, waana laacag la aan (bilaash).waxay ku shaqeysaa qarsoodi mana lahan diiwaan gelin(registro). Mansmottagningen: X. Qaabilaadda Ragga: Waa dhaqdhaqaaq loola jeedo ragga geysto xoog sheegadka jirka iyo maskaxda: Waxay bixisaa talooyin qof qof ah, daweyn kooxeed iyo la tashiyo. Ungdomsmottagning: X. Qaabilaadda dhallinyarada: Waxay ka jawaabtaa su aalaha la xiriira xiriirada gaarka, jirka, arrimaha nolosha, ka hortagga uureeysiga, iyo cudurada ku fido galmoodka, iyo uureysiga iyo soo rididda(dhicinta) iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa joogo qaabilaadda la taliyeyaal, Umuliso, iyo dhaqaatiir. Ungdomsmottagningens föraldratelefon: Teleefanada waalidka ee xarunta qaabilaadda dhallinyarada: Maalin kasta oo talaado ah inta u dhexeyso waxay leeyhiin ciyaaddo furan ee dhallinyarada Aabbayaasha iyo Hooyooyinka wey wici karan si ay ula hadlaan la taliyaha si ay u helaan macluumaad talo ah oo kaalmeeyhaayo aabbaha iyo hooyada. Kuwa soo wacaayo wxay sameyn karaan inaaney sheegin hawiyaddooda. Missbruksvård Mercur: Daryeelka idmaanka Mercur: Waa hay ad ka shaqeyso kaalmeynta mashaakilka qamriga iyo mukhadaraadka. Mercur waxay soo jeedisaa talooyin la xiriira arrimaha qamriga iyo mukhaddaraadk ee dadka waaweyn. Aqaariibta waa ineey kaalmo ka geystaan arrinkaan. Mercur waxa kale ay ka shaqeysaa ka hortagga cabitanka qamriga iyo mukhaddaraadka ee goobaha waxbarashada iyo shaqada. Ungdomssupport: Kaalmada dhallinyarada: Waxay ka shaqeysaa shaqada ka hortagga marin habawga dhallinyarada. Waxayna la shaqeysaa Booliiska iyo Dugsiyada, sida badanna waxaa ka shaqeeyo dhallinyaro.
8 Kaalmada dhallinyarada waxey bixisaa talooyin iyo kaalmo la siiyo walidiinta, waxayna ugu yeerayaan in la daweeyo dhllinyarada da doodu u dhexeyso sano jirka. Medling: Dhexeeye: Marka qofku ka yar yahay 21 sano waxuu gelayaa dembi wuuna qiranyaa in loo soo bandhigay dhexeeye dembiyada dhallinyarada. dhexeeye waxaa loola jeedaa in dembiga ama dilka dhacay laga hadli karo. Vägskälet: Isgoys: Isgoys waa barnamij nidaamsan oo loogu yeero in laga hor istaago dhallinyarada edeb dembiyeedka horumarinayo jariimada joogtdaa iyo xadeynta dhacdooyinka edeb dembiyeedka. Arrinkaan kooxda loola dan leeyahay waa dhallinyarada da doodu tahay sano jirka, waana in laga xajiyo dhacdooyinkaas. Ekonomiskt bistånd: Kaalmada dhaqaale: Qof kasta oo ku nool degmada Katrineholm waxuu xaq u leeyahay saldhig dhaqaale oo ammaan ah. Tan waxaa loola jeedaa in qofka ku sugan Katrineholm aanan awoodin ineey bixiyaan naftooda iyo qoysaskooda, wxay ahaanayaan kuwa awood u hela ineey helaan kaalmo dhaqaale. Kaalmada iyo wasaa isha la soo tijbiyay, Tan wxaa loola jeedaa diraasadii dhaqaale ee lagu sameeyay booqashadii 1aad. Qof kastoo rabo inuu helo jid kasta oo kale oo isku day ah kaalmeynta naftooda. Wasaaradda adeegga bulshada waxay leedahay buug ay ku cad yihiin macluumaadka la xiriira sidaad u heleyso lacagaha iyo sida loo adeegsanaayo. Budget och skuldrådgivning: Miisaaniyadda iyo talooyinka deymaha: Soo bandhigidda talooyinka iyo lacagaha iyo deymaha iyo bandhigidda talada iyo kaalmada oo la xiriirto xaaladdaada dhaqaale ee gaarkaa. Waxaad u heli kartaa miisaaniyaddaada iyo deymahaba la taliyeyaal kula eegaayo oo lacag la aan ah(bilaash). La xiriir adeegga bulshada haddii aad rabto macluumad dheeriya: Cinwaanka: Västgötagatan 18, Katrineholm Telefoon: Wixii kale ee macluumaad dheeriya cinwaankaan ka daalaco: Kultur och fritid: Dhaqanka iyo waqtiyada firaaqa:
9 Katrineholm waxaa ka jiro aragtiyo iyo tijaabooyin. Inta waxaa ku jiro xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan arrimaha dhaqanka iyo ciyaaraha. Kulturhuset Ängeln En mötesplats för upplevelser, konst och litteratur : Guriga dhaqanka(ängeln) hoolka kulanada doodaha(shirarka)fanka iyo suugaanta: Guriga dhaqanka iyo maktabadda Katrineholm, Katrinrholm waxay leedahay hool bandhig faneed iyo biibito. Inta waxaa kaloo ka jira bandhigyo kale iyo booqashada qoraha, xafladaha muusikada iyo bandhig masraxeedka ilmaha iyo workshopyo muhiima. Bandhigga waxaad ka heleysaa fan ay soo gudbinayaan fanaaniinta gobolka, waddanka iyo caalamka. Bandhig faneedka waxuu soo bandhiga 10neeyo bandhig oo kala duwan sanadkiiba. Maktabadda Katrineholm waxaa kaloo ka jira maktabadda dhexe qaybta dhaqanka, oo furuuc ku leh meelaha ka tirsan Katrineholm. Maktabadda waxyaabaha ay soo bandhigeyso waxaa ka mid ah qaybo ballaaran oo daabacaadyo ah iyo warbaahinta elektroonigga ah, sida ay tahay baahiyaha dadka degaanka(kommuninnevånarnas). Maktabadda waxaa kaloo yaal Kombiyuutarro la isticmaali karo iyo shabakad aan xarig laheyn (wireless) haddii aad adigu wadato Kumbiyuutar gaara. Waxaa ku ag yaal qaybta joornaalada Biibito. Meeshaan waxaad ka cabi kartaa kana cuni kartaa wax kooban adoo akhrisaayo joornaal ama warside cusub. Waxaa kaloon leenahay hoolalka muxaadaraha, waxaa dhacdo in waqtiyo badan lagu qabsado shaqooyinka guriga ee ardayga, waxaa kaloo ka jiro kaffespråk (oo ah ku hadlidda luqada Swedishka(Luqada Kafeega)oo ah ka hadlidda waxyaabaha caadiga si loo dhiso luqada swedishka. Ung kultur och fritid:: Dhaqanka dhallinyarada iyo waqtiyada firaaqa: Dhaqanka dhallinyarada iyo waqtiyada firaaqa waa dhaqdhaqaaqa dhallinyarada da doodu u dhexeyo jirka. Iyagu waxay ka shaqeeyaan goobka dhaqanka ee cusub ee dhallinyarada ee Katrineholm, waxaa kaloo ka jiro duubid studyo iyo warshad shaqo(workshop). La xiriir xarunta dhaqanka iyo dalxiiska maamulkooda haddii aad rabto macluumaad dheeriya oo la xiriiro dhaqanka ama dhaqanka dhallinyarada iyo waqtiyada firaaqa: Xarunta dhaqanka: Cinwaan: Djulögatan 27, Katrineholm Telefoon: Wixii macluumaad dheeriya kala xiriir cinwaankaan:
10 Katrineholms Sportcentrum: Xarunta ciyaaraha Katrineholm: Xarunta ciyaaraha ee Katrineholm waxaa ka jiro Backvallen, Duveholmshallen, ishallen(hoolka ciyaaraha barafka), Hoolka teniska, Gymnastik(jirdhiska) waxay ka mid tahay xarumaha ciyaaraha ee Sweden caanka ka ah. Inta waxaad ka heli kartaa qaybo kala duwan oo ciyaaraha la dheelo ah. La xiriir xarunta ciyaaraha haddii aad rabto macluumaad dheeriya: Cinwaan: Västgötagatan 31, Katrineholm Telefoon: Wixii kale ee macluumaad dheeriya kala xiriir: Arbete och näringsliv: Shaqada iyo ganacsatada: Katrineholm waxaa ka jiro dhaqaale kala duwan waxuu leeyahay shirkado najaxaay iyo kuwo soo korayo. Degmada ama kommunka waa shaqa bixiyaha ugu weyn waxaana u shaqeeyo in ka badan 3000 shaqaale, kuna shaqeeyo 100 xirfadood oo kala duwan. Masaalixda muwaadiniinta iyo baahidooda waa hadafka hawsha. Shaqa bixiyeyaasha ugu waaweyn waa kuwa gaarkaa, SKF Meken, Ericsson, Sörmlands Grafiska iyo Kronfågel oo ah warshadda Digaagga. Näringslivscentrum: Xarunta Ganacsiga: Waa xarunta hay adda ee maamulka madaniga, hawlaha ganacsiga iyo koriimada bulshada. Waxaa isu tegey laacibiin asaasiyiin ku ah dhaqaalaha ee Katrineholm. Qaybta shaqooyinka ganacsiga waxay qabataa si ay ugu sahlanaato in shirkadaha jiro la ballaariyo lana horumariyo, lana dhiirigeliyo shirkadaha bilawga ah, iyo shaqooyinka ganacsi ee cusub iyo koriimadoodaba.
11 Waxaa yaal xarunta shaqooyin fiican oo mashaariica oo kaa caawin karo masaa isha ganacsiga. Waxaadna ka heli kartaa talooyin iyo kaalmo xaaladaha soo socdo:. Ma rabtaa inaad balowdo.. Ma leedahay fikrad aad rabto inaad xaqiijiso.. Ma u baahan tahay Tababare.. Ma leedahay shirkad aad rabto inaad ballaariso hormarisana.. Ma leedahay dhul iyo degaan dacwad ku jiro.. Ma qabtaa su aalo la xiriiro mashaariic maaliyadeed.. Ma rabtaa shabakad.. Ma rabtaa inaad hesho macluumaad shaqo ee Katrinehom.. Ma ku fikiree inaad hesho kaalmada dhaqaale ee Midawga Yurub. Xarunta ganacsiga waxaa ka jiro mashaariic kale iyo horumarinta bulshada oo ah:. Almi oo ah shariik (Wadaage) ganacsi.. Coomoanion.. Khibrad warshadeed.. Jaamacadda Linköping.. Xarun cusub ee ganacsi.. Katrinehoms EntreprenörCenrtum AB.. Neem ( Machadka maaliyadaha yaryar ). La xiriir hagaha shaqooyinka haddii aad rabto macluumaad dheeriya oo ku saabsan shaqada iyo ganacsatada: Cinwaan: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm Telefoon: , Wixii kale oo macluumaad dheeriya kala xiriir:
JURIDIK FÖR TOLKAR (upplaga 4:1) ORDLISTA
Studiematerial 1 FÖRORD Den här svensk somaliska tolkordlistan över juridiska termer är utarbetad av somaliska tolkar på Åsa folkhögskola. Tidigare professorn i juridik vid Mogadishus universitet Omar
Hage-haaga bangiga internetka. Ku soo dhawoow. Halkani way furantahay mar kasta.
Hage-haaga bangiga internetka Ku soo dhawoow. Halkani way furantahay mar kasta. Ku soo dhawoow bangiga internetka! Halkani way furantahay mar kasta si aad u samaysan karto danahaaga bangi markii kugu habboon.
Goorma samaynayaa mammogramka
Goorma samaynayaa mammogramka BAARITAANKA KAHOR Waa maxay mammogramka? Mammogram waa raajada naasaha. Raajo waa hab naasaha lagu masawirro Sababta mammogramka loo sameeyo ayaa waxay tahay in naasaha laga
nyistan Välkommen till Västerås www.vasteras.se
nyistan 2014 2015 Välkommen till Västerås www.vasteras.se Visste du att... Västerås utsågs till Årets studentstad 2012-2013 den första Hennesbutiken i världen öppnades i Västerås 1947 av Erling Persson.
Habkaan ayaa uu buuxinee foomka Soo bandhigida bisha oo loogu tala galay lacagta daganaanshada Shaqo goobe
Sida: 1 av 5 Somaliska Så här fyller du i i blanketten Månadsredovisning för etableringsersättning - Arbetsökande Habkaan ayaa uu buuxinee foomka Soo bandhigida bisha oo loogu tala galay lacagta daganaanshada